ओली- प्रचण्डका पत्रकारबीच फेसबुकमा लफडा, गणेश बस्नेतलाई महेश्वर दाहालले फर्काए कडा जवाफ — Imandarmedia.com
ओली- प्रचण्डका पत्रकारबीच फेसबुकमा लफडा, गणेश बस्नेतलाई महेश्वर दाहालले फर्काए कडा जवाफ
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपाको पत्रकार संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले हिजो संगठनका संयोजकले भनेको भन्दै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत जोडेर एउटा स्टाटस लेखेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताका बिचमा निकै विभाजन र बिबाद रहेको प्रष्ट देखियो ।
प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञले काठमाडौँ प्रेसलाई ह्याक गरि समाचार डिलेट गरेको प्रसंगमा जोडेर नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य क्षेत्रबाट जारी भएका बक्तब्य र टिका टिप्पणीलाई लिएर गणेश बस्नेतले बिबादास्पद स्टाटस लेखेका थिए । खासमा महेश्वर दाहाल र गणेश बस्नेत बिचमा त्यस्तो के कुरा भएको थियो ? र जसकारण आन्तरिक बिबाद बाहिर चाताछुल्ला भयो भन्ने बिषयमा आज महेश्वर दाहालले लामो स्पस्टिकरण लेखेका छन् । गणेस बस्नेतलाई जवाफ फर्काउदै झिल्काेमार्फत बाहिरिएकाे उनकाे स्पस्टिकरण जस्ताको त्यस्तै ।
“हाम्रो संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले मैले भनेको भनेर मैले बोल्दै नबोलेको कुरा शुक्रवार राति ९ बजेपछि एउटा स्ट्याटस लेख्नुभएको छ । शनिवार विहान उठ्दा धेरै साथीको फोन र मेसेज आएको रहेछ । मैले पढें । आश्चर्यचकित भएँ । सहसंयोजक जस्तो गरिमामय पदमा बसेको जिम्मेवार नेतृत्वले यति अनैतिक झूटको खेती गर्नुहोला भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइन ।
म ओछ्यानमा ढल्किएर कोरोना भाइरसको अन्त्यपछि विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर एक जना भारतीय लेखकको लेख मोबाइलमा पढ्दै थिएँ । पौने ९ वजेतिर गणेश बस्नेतले मलाई फोन गर्नुभयो । मैले फोन उठाएँ । किन सानो आवाज आयो कमरेड विरामी पर्नुभयो कि के हो भनेर उहाँले सोंध्नुभयो । मैले होइन, म त पल्टेको छु भनें । यसपछि उहाँले एकाएक प्रेस संगठनमा पूर्व प्रेस चौतारी र प्रेस सेण्टर भए भन्नुभयो । मलाई त्यसपछि झोक चल्यो ।
गणेश बस्नेतलाई कुनै कुरा गर्नुछ भने पहिला आफ्नो नकारात्मक निश्कर्ष निकालेर झगडा गर्ने मुडमा प्रायः कुरा गर्ने तरिकाले हिजो चाहिं मलाई झोक चल्यो । ‘तपाई जहिले पनि बखेडा झिक्नुहुन्छ, मसँग सधैं खेल्नुहुन्छ, यस्ता नकारात्मक कुरा गर्ने ? खेलिरहनेसँग म अब कुरा गर्दिन’ भनें । त्यसमा मैले पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री वादल, नेपाल पत्रकार महासंघ, महासंघका महासचिव रमेश बिस्टको कतै नाम लिएको छैन । महासंघको वक्तव्यको बारेमा उहाँसँग कुरा भएकै छैन ।
शनिवार विहान पौने नौ बजे फोन गरें । उहाँको फोन अफ थियो । मैले उहाँको फोनमा एसएमएस गरें, ‘यस्तो झूटको पराकाष्ठा ।’ त्यसपछि पनि पटकपटक फोन गरें । विहान धेरै बेरसम्म फोन अफ थियो । पछि फोन गरेर भनें, ‘त्यसको तपाईंले पुष्टि गर्नुपर्छ । हैन भने यस्तो झूटको खेती नगर्नुस् ।’ पछि उहाँले फेसबुकमा रहेको स्ट्याटस त हटाउनु भएको छ । तर, अझै पनि साथीहरुमा भ्रम कायम नै छ । संगठनलाई एकताबद्ध र सुदृढ गरेर लैजाने हाम्रो प्रयासलाई यतिवेला क्षति पु¥याएको छ ।
बरु यसबारेमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यसँग कुरा भएको थियो । शुक्रवार विहान सूर्य थापासँग पहिला कुरा भयो । कसैको उजुरीविना तथ्यविना पत्रकारहरुको साझा संगठनका महासचिवले आफ्नो नामै किटेर वक्तव्य दिएको भन्दै सूर्य थापाले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । महासंघका महासचिवबाट वक्तव्य आएको हो भने पनि यसको नैतिक जिम्मेवारी सभापति गोविन्द आचार्यकै हुन्छ, म गोविन्दजीसँग कुरा गर्छु भनें ।
त्यसको लगत्तै सभापति गोविन्द आचार्यसँग कुरा गरें । काठमाडौं प्रेसको बारेमा कुरा आएपछि वक्तव्य दिने हाम्रो कुरा भएको हो । वक्तव्य दिंदा सूर्य थापाको नाम आएको बारेमा म पनि छलफल गर्दैछु, कमजोरी भएको हो भने आइतवार महासंघका उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुसँग बसेर हामी एउटा निश्कर्ष निकाल्छौं भन्नुभयो । वाहिर जे आए पनि मुख्य नेतृत्वको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी लिदैं एउटा निश्कर्ष तपाईंले दिनुपर्छ र महासंघको साझा चरित्र बचाउन कहीं कतैबाट भएका नकारात्मक कामलाई तपाईंले चनाखो हुँदै सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ मैले भनें ।
सही र गलत के हो अजेण्डाका आधारमा हामीले जानुपर्छ । साविक प्रेस चौतारी, साविक प्रेस सेण्टर या एमाले र माओवादी केन्द्रको भावनात्मक कुरा गरेर सही र गलतलाई ओझेलमा पारेर बहस गर्ने कुचेस्टा कसैले गर्नु हुँदैन । वहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञान, अपेक्षा विपरीत जाँदा हुने नकारात्मक असरबाट हामी सबै प्रभावित हुन्छौ । किनभने हामी एउटै डुङ्गामा छौं । डुङ्गामा बसेर प्वाल पार्ने हर्कत कमसेकम हामी नेतृत्वमा रहेकाले त गर्नै हुन्न । मेरो मेरो जोड, देशभरिका साथीहरुको संगठनको एकता र विकृतिप्रतिको चासो, चिन्ता र सल्लाहका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । महेश्वर दाहाल २३ चैत्र २०७६”